Ngwongwo ịwa ahụ nwere ike ịtụfu
Ihe ngwugwu mberede
Ngwọta plasta arụ ọrụ
Ọkpụkpụ Pimple Patch
Achịcha jụrụ oyi
Ihe enyemaka enyemaka nke ịhụ nsọ
Mkpọchi ọrịa ngagharị
Ihe mgbochi enyemaka mgbu
Ụlọ ọrụ Henan Wild Medical Technology Co., Ltd.
Onye na -ebubata ngwaahịa na onye ọchụnta ego
Otu n'ime ụkpụrụ nduzi anyị bụ iji mmekọrịta kpọrọ ihe. Anyị anaghị arụsi ọrụ ike iji nweta ọrịre ahụ, kama anyị na -agbasi mbọ ike inweta azụmahịa ndị ahịa anyị kwa ụbọchị. Anyị ghọtara na mgbe ndị ahịa anyị họpụtara anyị, ha na -enyefe akụkụ dị oke mkpa nke azụmahịa ha, ihe ọmụma ha nye anyị. Ị nwere ike ịtụkwasị anyị obi maka ntụgharị ọsọ ọsọ, echiche ọhụrụ na ọrụ dị elu nke na-adị ka anyị bụ ndị ọrụ gị, ọ bụghị onye na-ere ahịa.
maara ihe na Ahụmahụ
Anyị anọwo na ụlọ ọrụ ahụike ihe karịrị afọ 10 ma na -akwado ndị ahịa anyị ọbụna tupu imepe azụmahịa anyị. Site n'akụkọ ihe mere eme ogologo oge, ndị ahịa anyị nwere ike zuru ike nke ukwuu ịmara na ha nwere onye mmekọ maara ngwaahịa ha ruo obere nkọwa. N'agbanyeghị ma mkpa gị dị mfe ma ọ bụ dị mgbagwoju anya, ọ nwere ike bụrụ na ndị otu anyị ahụla ụdị ihe a ma mara nke ọma ihe ọ ga -ewe iji mee ka ịzụta gị dị mfe.
Ọkachamara nke ụlọ ọrụ miri emi
Ọ bụ ezie na anyị nwere ike itinye ihe ọmụma anyị nwetara n'ime iri afọ gara aga na ụlọ ọrụ ahụike, enwere ole na ole anyị rụrụ ọrụ karịa ndị ọzọ. Ndị a gụnyere ọrụ ndị ọkachamara, nrụpụta, nkesa, lọjistik na ndebanye aha ahụike.
HENAN WILD TECHNOLOGY nwere otu ozi dị mfe: ime ka ịzụrụ gị dị mfe.
A na -arara ọgwụ anụ ọhịa maka idobe azụmaahịa azụmaahịa ọdịnala ya mgbe ọ na -emepe ahịa ọhụrụ yana ịbawanye Pọtụfoliyo nkeonwe. Companylọ ọrụ ahụ na -emepụta uru ahịa azụmaahịa dị ka onye ọchụnta ego na -arụsi ọrụ ike site na ịnye ndụmọdụ usoro, ntuziaka ego, yana netwọ ụwa. MGBE AHỤ na -enweta ihe ịga nke ọma na itinye ego ya site na ịdabere na iguzosi ike n'ezi ihe nke njikwa ya na nrara ha raara onwe ha nye ọrụ dị mma.
AKA WILD na -achọ azụmahịa na mmekorita ya na ndị otu njikwa nka nwere ebumnuche nke ịrụpụta ọpụrụiche n'oge. Anyị na-elekwasị anya na azụmaahịa na-adigide nke nwere ebumnuche uto ogologo oge nwere ohere maka mgbasawanye ụwa.
Anyị kpebisiri ike imepụta ị nweta ngwaahịa ọgwụ n'otu oge, iji mezuo ihe dị iche iche achọrọ maka ndị ahịa niile na nhazi dị iche na ụlọ ọrụ ahụike dị iche iche maka mmepe nkịtị.
A na -arara ọgwụ anụ ọhịa maka idobe azụmaahịa azụmaahịa ọdịnala ya mgbe ọ na -emepe ahịa ọhụrụ yana ịbawanye Pọtụfoliyo nkeonwe.